Iska diiwaangeli qorshaha laba geesoodka ah | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Sidee qof u-qalmi labada caymis u heli karaa qorshaha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah?
Way fududahay in la helo qorshaha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Waxaa jira 3 talaabooyin muhiim ah. Marka koowaad, waxaad u baahan doontaa inaad xaqiijiso u-qalmitaankaaga qorshaha laba geesoodka ah. Marka labaad, hel qorshe sida ugu wanaagsan u buuxinaya baahiyahaaga daryeelka caafimaadka. Kadib, marka saddexaad, waxaad iska diiwaangelin kartaa qorshaha laba geesoodka ah ee loo qalmi karo adigoo isticmaalaya wakiil ama onlaynka.
Tallaabada 1: Xaqiiji u-qalmitaankaaga qorshahan caafimaad ee laba geesoodka ah
Haddii aad haysato qorshaha caafimaadka Medicare iyo Medicaid labaduba, waxay u badan tahay inaad tahay qof u-qalma labada caymis waxaadna heli kartaa qorshaha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah Ka hel faahfaahino dheeraad ah cidda u-qalanto labada caymis.
Tallaabada 2: Eeg qorshooyinka laba geesoodka ah ee loo qalmi karo ee aan ka bixinno aaggaaga
Faahfaahinada ku saabsan qorshayaasha laba geesoodka ah ee loo qalmi karo ee halka aad ku nooshahay iyo macaashyada aad heli karto, fadlanka raadi qorshayaasha gudaha gobolkaaga.
Tallaabada 3: Iska diiwaangeli qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah ee loo qalmi karo?
Markaad go'aansatid qorshaha labada geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku habboon baahiyahaaga, waa waqtigii aad isku diiwaangelin lahayd. UnitedHealthcare waxay leedahay wakiilada iibka si ay kaaga caawiyaan telefoonka. Ama waxaad ka qabsan kartaa booqasho gurigaaga. Waxa kale oo aad iska diiwaangelin kartaa onlaynka. Ka eeg hoos faahfaahinada ku saabsan sida la isaga diiwaangeliyo onlaynka
Hadda Iska diiwaangeli Onlaynka
Si ay isugu diwaangeliyaan qorshayaasha laba geesoodka ah onlayn ahaan, codsadayaashu waxay buuxiyaan oo soo gudbiyaan codsiga diiwaangelinta onlaynka ah. Qofka codsanaya waxaa la weydiin doonaa su'aalo xiriir ah, nidaamkuna wuxuu diiwaangelinayaa jawaabaha la bixiyay.
Kaliya raac tallaabooyinkaan fudud
Raadi Qorshayaashasi aad u hesho midka aad rabto inaad ku biirto.
Guji badhanka “Iska Diiwaangeli Qorshaha” si aad u bilowdo geedi-socodka codsiga.
Akhri oo oggolow afeefta diwaangalinta.
Bixi faahfaahin gaar ahoo ka jawaab su'aalaha ku yaala shaashad kasta.
Laba jeer hubi wax kasta oo arjiga ku qoran inay sax yihiin oo guji “Gudbi.”
Hel iimayl xaqiijinaya codsiga in la helay. Fadlan ogow: codsadayaasha aan bixinin cinwaanka iimaylka ma heli doonaan xaqiijinta iimaylka.
Haddii u-qalmitaanka codsadaha ay xaqiijiyaan Medicare, wuxuu naga heli wicitaan ama iimaylmarka 30 maalmood ee ugu horreeya si aan ugu soo dhawayno qorshahayaga.
Waa inaad diyaar la tahay macluumaadka hoose:
Lambarka Aqoonsiga (ID) Medicaid (Waajib). Lambarka Aqoonsiga (ID) Medicare (Waajib).
Macluumaadka ku saabsan qorshayaasha caymisyada kale ee aad haysato (Waajib).
Magaca dhakhtarka aad doorbidayso (ama mid ayaad dooran kartaa isla markaas) (Ikhtiyaari, balse aad loogu taliyo).
Ama, na soo wac
La hadal mid ka mid ah wakiiladayada sharciyaysan. Waxay ku faraxsanaan doonaan inay ka jawaabaan su'aalahaaga waxayna kuu diiwaangelin doonaan qorshaha laba geesoodka ah ee loo qalmi karo ee adiga kugu habboon.
8 subaxnimo - 8 galabnimo wakhtiga maxalliga, 7 maalmood todobaadkii. Se habla español.
Markaad na soo wacdo, fadlan macluumaadkan diyaar ha ahaado.
Liiska dhakhaatiirta Si loo hubiyo in bixiyahaaga daryeelka aasaasiga ah (PCP) iyo takhasuslayaasha ay ku jiraan shabakadayada.
Kaararka Caymiska Si aad u muujiso qorshayaasha iyo macaashyada aad hadda haysato.
Daawooyinka Si la isku barbardhigo caymiska iyo kharashka daawada.